အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
18.1.2021 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမေရိကန်အရေပြားဆိုင်ရာအဖွဲ့က အမေရိကမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး သန်း ၈၀ လောက်မှာ မွေးရာပါအမွေးကျဲပါးတဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါက ခေါင်းပေါ်...
14.1.2021 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
>> ဆီးကျိတ်ကြီးသူများ စားသင့်တဲ့အစားအစာများ
2. အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
3. အနီရင့်ရောင်၊ အဝါရောင်...
အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်စေဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များ
13.9.2020 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
တစ်နေကုန် ပင်ပန်းနေတာတောင်မှ ညဘက်ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ကြတာမျိုး ကြုံတွေ့ဖူးကြပါသလား။
လူတော်တော်များများဟာ အသင့်စားအစာတွေကို နေ့စဉ်နီးပါးစားလ...
အမျိုးသားများ ဘဝတစ်လျှောက် ကျန်းမာစေဖို့နည်းလမ်းများ
16.8.2020 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အမျိုးသားတွေက ဆရာဝန်ဆီသွားဖို့၊ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြဖို့ကို ပိုပြီးဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျားမှ၊ မခံမရပ်...
27.7.2020 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
>> ဘာကြောင့် ထိပ်ပြောင်ရတာလဲ?
● အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်မှုပုံစံမ...
အမျိုးသားများမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါအခြေအနေ (၈) မျိုး
21.7.2020 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. အရောင်အချို့ကို မမြင်ခြင်း (Color blindness)
Color blindness ဟာ အမျိုးသားတွေမှာပိုပြီး အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။ Color blindness ဖြစ်ခြင်း ရှိ...
1.7.2020 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
HPV virus (Human Papilloma Virus) ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကြွက်နို့ရောဂါအကြောင်းဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေကို ဦးတည်ပြောတာ များပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက အမျိုးသမီး...
အိပ်ပျော်စေဖို့ ဗီတာမင်နှင့် အာဟာရဓာတ်များ
18.6.2020 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
မနက်အစောကြီး ၂ နာရီရောက်နေပြီး အိပ်ရာထဲ တလူးလူး တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်နေရပြီဆိုရင်တော့ ညအိပ်မပျော်ဖြစ်တာ ငါ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေ...